Kushambadzira Kurovedza | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 12, 2021 Chishanu, Mbudzi 12, 2021 Douglas Karr
Kwemakore, ndakashandisa uye ndakabatanidza akawanda ema social media mapuratifomu evatengi. Ndichiri nehukama hukuru nevakawanda uye munoramba muchindiona ndichisimudzira mapuratifomu matsva uye aripo. Izvi zvinogona kuvhiringa vaverengi… vachishamisika kuti sei ndisingangokurudzira uye kusunda chikuva chemunhu wese. Handidaro nekuti zvese zvinodiwa nekambani imwe neimwe zvinosiyana kubva kune imwe. Kune akawanda emasocial media mapuratifomu anogona kubatsira mabhizinesi… asi yako
Wanga uchiziva here kuti pane chaiko sainzi yesainzi kumashure kwekuti maviri kana anopfuura mavara anowirirana sei? Ini handisi ophthalmologist kana chiremba wezve meso, asi ndichaedza kududzira sainzi pano kune vanhu vakareruka seni. Ngatitangei nemuvara kazhinji. Ruvara ndirwo Rwunowanzoitwa apuro rakatsvuka… handiti? Zvakanaka, kwete chaizvo. Iko kuwanda kwekuti mwenje unoratidzwa sei uye kubviswa kubva pamusoro peapuro kunoita kuti rioneke, kushandurwa ne